छोटकरी विशेष 17 दिन पहिले
छोटकरी विशेष 18 दिन पहिले
छोटकरी विशेष 19 दिन पहिले
छोटकरी विशेष 20 दिन पहिले
छोटकरी विशेष 21 दिन पहिले
छोटकरी विशेष 23 दिन पहिले
आमाकाे हेरचाह नगर्ने सन्तानलाई थुनामा पठाउन आदेश
आमाकाे हेरचाह नगरेकाे आराेपमा नेपाल राष्ट्र बैंककी निर्देशक सुष्मा रिजाल पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएकाे छ। अदालतले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ बमोजिमको कसूरमा थुनामा पठाउन आदेश दिएको हाे। आफ्नो तीन करोड बढी सम्पत्ति लिएर आफ्नो हेरचाह नगरेको भन्ने उनकी आमाकाे उजुरीकाे आधारमा उनी पक्राउ परेकी थिइन्।
स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरिँदै, तत्काल विद्यालय बन्द नहुने
सरकारले आजबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भएकाे छ। साेमबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयअनुसार नयाँ मापदण्ड लागू हुने भएकाे हाे। त्यस्तै सरकारले काेराेना बढ्दै गएपनि तत्काल विद्यालय बन्द नगर्ने भएकाे छ। यसअघि मन्त्रालयमा बसेकाे सराेकारवालाहरूकाे बैठकले विद्यालय सञ्चालन वा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने माग राखेकाे थियाे।
वार्तापछि विप्लव समूह थप अराजक र अपराधिक बनेकाे गुप्तचरकाे दाबी
गुप्तचर निकायले सरकारलाई विप्लव समूहकाे अपराधिक गतिविध जारी रहेकाे रिपार्ट बुझाएकाे छ। निकायले विप्लव समूहले सरकारसँगकाे वार्तालाई कार्यकर्ता रिहा गराउने, प्रतिबन्ध फिर्ता लिने अवसरका रूपमा लिएकाे बताएकाे छ। त्यस्तै समूह चन्दाधन्दामा सक्रिय रहेकाे समेत बताइएकाे छ। समूह थप अराजक र अपराधिक बन्दै गएकाे भन्दै सुरक्षा सतर्कता अपनाउनसमेत आग्रह गरिएकाे छ।
छोटकरी विशेष 24 दिन पहिले
नेपाललाई ओलीकाे चेतावनी, पार्टी ध्वस्त पारे 'ठीक पार्ने'
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टी ध्वस्त पार्न खाेजे 'ठीक पार्ने' बताएका छन्। उनले नेपाललाई आत्माआलाेचना गरेर पार्टीमा फर्किए स्वागत गर्ने समेत बताएका हुन्। त्यस्तै माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन समेत प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिएका छन्। उता नेपाल-खनाल समूहले ओली पार्टी विघटन गर्नेतर्फ उद्दत रहेकाे निष्कर्ष निकालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई सांसदले साेधे, चुच्चे नक्सा खै ?
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुच्चे नक्सा खै भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। अहिलेको सरकारले 'राष्ट्रियता देखाउने, चुच्चे नक्सा हराउने' भन्दै उनले टिप्पणी गरेकाे हुन्। यसअघि सांसदहरूले लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेकमा जनगणना गर्न माग गरेका थिए।
विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई सुझाव, बच्चाहरूमा भने संक्रमण बढ्दै
काेराेना संक्रमणकाे खतरा रहेकाे भन्दै विद्यालय बन्द गर्नेबारे सरकारले गृहकार्य थालेपछि सराेकारवालाहरूले तत्काल विद्यालय बन्द नगर्न सुझाव दिएका छन्। विद्यालय सञ्चालन वा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनीहरूकाे सुझाव छ। यसअघि सीसीएमसीले विद्यालय बन्द गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेकाे थियाे। मन्त्रिपरिषदकाे बैठक आज बस्दैछ।
बेलायती राजकुमार फिलिपकाे निधन, यस्ताे छ उनकाे नेपाल कनेक्सन
बेलायती राजकुमार फिलिपकाे निधन भएकाे छ। ९९ वर्षका फिलिप महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाका श्रीमान् हुन्। उनी सन् १९६१ मा राजा महेन्द्र वीरक्रम शाहको निमन्त्रणामा नेपाल आएका थिए। त्यतिबेला उनले शिकार खेल्न राजा महेन्द्रले गरेका आग्रह नकार्न हातमा चाेट लागेकाे अभिनय गरेकाे बताइन्छ। उनी महारानीसहित नेपाल आएका थिए।
छोटकरी विशेष 27 दिन पहिले
माओवादी र जसपालाई समेटेर कांग्रेसले सरकार बनाउने
नेपाली कांग्रेसले माओवादी र जसपालाई संयुक्त सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेकाे छ। कांग्रेसले आफ्नाे नेतृत्वमा सरकार बनाउन दुवै पार्टीलाई प्रस्ताव गरेकाे हाे। प्रस्तावमा माओवादी सकारात्मक भएपनि जसपाले परामर्शका लागि समय मागेकाे छ। उता जसपाले जेलबाट छुटाउनुपर्ने आफ्ना नेता कार्यकर्ताकाे विवरण सरकारलाई बुझाएकाे छ।
राष्ट्रपतिले बाँडिन् पदक र मानपदवी, पदकमा छैन नयाँ नक्सा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न मानपदवी, अलङ्कार तथा पदक वितरण गरेकी छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा पदकहरू वितरण गरिएको हो। वितरित पदकहरूमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सहितको नयाँ नक्सा समावेश गरिएको छैन। गृहमन्त्रालयले पोहोर सालकै पदक भएकाले नक्सा नसमेटिएको बताएको छ।
२५ जनाभन्दा बढीको भेलामा रोक लाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको माग
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २५ जनाभन्दा बढीको भेलामा रोक लगाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ। भिडभाड अत्यधिक भएको भन्दै मन्त्रालयले कोरोनाको खतरा बढेको बताएको हो। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो समय लक्षणहरू अलि जटिल देखिन थालेकाले बिरामीहरूलाई अस्पताल भर्ना गर्नु परिरहेको समेत बताए।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा जनगणना गर्न माग
नेपालकाे नक्सामा समेटिएकाे लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा पनि जनगणना गर्न प्रतिनिधसभा बैठकमा माग उठेकाे छ। बैठकको शून्य समयमा बाेल्दै सांसद विमला विश्वकर्माले भूमि यथाशिघ्र फिर्ता ल्याई २०७८ सालको जनगणना गर्न माग गरेकी हुन्। त्यस्तै आजकाे बैठकमा सांसदहरूले निम्न विभिन्न विषयमा बहस गरेका छन्ः
छोटकरी विशेष 28 दिन पहिले
माओवादी केन्द्रका चार सांसद पदमुक्त, मन्त्री पद पनि गयाे
माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका चार सांसद पदमुक्त भएका छन्। माओवादी केन्द्रले सांसदहरूले दल परित्याग गरेको पत्र संसद सचिवालयलाई बुझाएसँगै उनीहरू पदमुक्त भएको सभामुख अग्नी सापकोटाले बताए। उनीहरू चारैजना मन्त्री छन्। पुनःनियुक्ति नपाएमा उनीहरू मन्त्रीसमेत रहने छैनन्। याेसँगै रिक्ट सांसद सिटहरूमा उपनिर्वाचनमार्फत सांसदहरू ल्याउनुपर्नेछ।
बिस्केट जात्रा नराेक्न सर्वाेच्चकाे आदेश
भक्तपुर जिल्लास्तरीय कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले बिस्केट जात्रामा राेक लगाएकाे भन्दै सर्वाेच्चमा परेका रिटमा आज आदेश जारी भएकाे छ। अदालतले बिस्केट जात्रामा राेक नलाउन आदेश जारी गरेकाे हाे। संकट व्यवस्थापन केन्द्रले काेराेनाकाे खतरा जारी रहेकाे भन्दै बिस्केट जात्रा नगर्न निर्देशन जारी गरेकाे थियाे।
छोटकरी विशेष 29 दिन पहिले
निजामती प्रशासनप्रति उपप्रधानमन्त्री क्रुद्ध
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निजामती प्रशासनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सिंहदरबारमा आयोजित नेपाल सरकारका सचिवबीच अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्मचारी प्रशासन झिङ्गे टसाई सोचबाट ग्रसित भएको टिप्पणी गरेका हुन्। निजामती कर्मचारीले परिणमलाई भन्दा प्रक्रियामा ध्यान दिने गरेको समेत उनले बताए।
फोर्ब्स धनाड्य सूचीमा जेफ बेजोस पुनः एक नम्बर, विनोद चौधरी खस्किए
फोर्ब्सकाे सूचीअनुसार विश्वकै सर्वाधिक धनी व्यक्तिमा पुनः जेफ बेजोस घोषित भएका छन्। यसवर्ष उनको कूल सम्पत्ति १७७ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। त्यस्तै सूचीको दोस्रो स्थानमा इलोन मस्क रहेका छन्। वर्ष २०२१ मा विश्वभर ४९३ नयाँ अर्बपति थपिएका छन्। यता विनोद चौधरी भने यो वर्षपनि सूचीमा तल खस्किएका छन्।
कर्णाली सरकार अल्पमतमा, नयाँ समीकरणका लागि एमाले दाैडमा
एमालेका तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वकाे सरकार अल्पमतमा परेकाे छ। एमालेका मन्त्रीहरूले आज राजीनामा दिएका हुन्। एमाले-माओवादी समीकरण बिग्रिएसँगै एमालेले यामलाल कँडेलकाे नेतृत्वमा सरकार निर्माणकाे प्रक्रिया अघि बढाउने भएकाे छ। एमाले कर्णालीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएकाे छ।
४ मन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रको कारबाही, सांसद पद नरहने
नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले प्रवेश गरेका आफ्ना चारजना सांसदलाई कारबाही गरेको छ। केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरीमन्त्री प्रभु साह र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई कारबाही गरेका हुन्। उनीहरू एमाले प्रवेश गरेका थिए। योसँगै उनीहरूको सांसद पदसमेत खारेज हुने बताइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोरोना बढ्दै गएको भएपनि लकडाउन गर्ने योजना नरहेको बताएका छन्। ‘नेपाल हेल्थ कनक्लेभ २०२१’ मा बोल्दै उनले कहिल्यै लकडाउन नगर्ने दाबी गरेका हुन्। सरकार त्यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्न लागीपरेको समेत उनको दाबी थियो। त्यस्तै उनले नेपालमा तीन किसिमका खोप लगाउने अनुमति दिइएको समेत बताए।
पुनः बढ्न थाल्याे काेराेना, जेठ-असारसम्म उच्च बिन्दुमा पुग्ने
नेपालमा पुनः काेराेना संक्रमण बढ्न थालेकाे छ। नयाँ भेरियन्टकाे काेराेना आएकाे खुलासाका बीच काेराेना बढेकाे हाे। नयाँ भेरियन्टकाे काेराेना तुलनात्मक रूपमा खतरनाक रहेकाे बताइएकाे छ। यसैबीच स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जेठ र असारसम्ममा काेराेना उच्च बिन्दुमा पुग्नसक्ने अनुमान अघि सारेका छन्।
पुनः बढ्यो प्रदुषण, यसपटक धनगढी प्रथम
नेपालमा पुनः अत्यधिक मात्रा वायु प्रदूषण बढेको छ। केही दिन यता घटबढ भइरहेको प्रदुषण सोमवार पुनः अत्यधिक मात्रामा बढेको हो। आज देशैभर प्रदूषण बढेको देखिएको छ। धनगढीमा सर्वाधिक उच्च रहेको प्रदूषण चितवन, काठमाडौँ, सिमरामा अत्यधिक रहेको देखिएको छ। धनगढीमा वायु प्रदुषणको मात्रा ४२९ एक्युआईसम्म पुगेको देखिएकाे छ।
बिस्केट जात्रामा यसवर्ष पनि राेक
काेराेना संक्रमणकाे खतरा जारी रहेकाे भन्दै भक्तपुर जिल्लास्तरीय कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले बिस्केट जात्रामा राेक लगाइएकाे छ। केन्द्रले मापदण्ड निर्धारण गर्दै त्यसकाे उल्लंघन गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० बमोजिम कारबाही गर्नेसमेत निर्णय गरेकाे छ। गत वर्ष पनि कोरोना संक्रमणको कारण स्थानीय प्रशासनले बिस्केट जात्रामा रोक लगाएको थियो।
नेपाली जेलमा रहेका कुख्यात सिरियल किलर चार्ल्स शाेभराज चर्चामा किन?
कुख्यात सिरियल किलर चार्ल्स शाेभराज पुनः चर्चामा आएका छन्। उनी सन् १९६३-१९६७ सम्मका शृंखलाबद्ध हत्या अभियाेगमा नेपाली जेलमा जन्मकैद काटिरहेका छन्। विभिन्न कारणले चर्चामा रहीरहने शाेभराज यसपटक जेलभित्रबाटै अन्तर्वार्ता दिएकाेले चर्चामा आएका हुन्। उनले बेलायती पत्रिकाहरू 'मिरर' र 'डेलिमेल'मा आफू तीनचार हप्तामा छुट्न लागेको भन्दै अन्तर्वार्ता दिएका हुन्।
अटिजम के हो? बच्चामा अटिजम भएको कसरी थाहा पाउने?
बालबालिकामा देखिने एक प्रकारको ‘न्युरो डेभलपमेन्ट डिसअर्डर’लाई अटिजम भनिन्छ। अटिजम भएका बालबालिकाहरू सामान्य बालबालिकासरह गतिबिधि देखाउन अक्षम हुन्छन् भने केही अस्वभाविक गतिविधि देखाउने गर्छन्। अटिजमको परिचय, आफ्ना बच्चामा अटिजम भएको पहिचान गर्ने उपायहरूलाई यहाँ सूचीकार गरिएका छन्।
अलग्गै अभियानको घोषणा गर्दै नेपाल समूह, फुटनजिक एमाले?
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित नेताहरूलाई धमाधम कारबाही गरेपछि उक्त समूहले अलग्गै अभियान थाल्ने भएको छ। उक्त समूहको आज बस्ने बैठकले कसरी अभियानलाई अगाडि लैजाने भन्नेबारे निर्णय लिनेछ। नेताहरूले ओलीसँगै बस्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन्। योसँगै कतिपयले एमाले फुटनजिक पुगेको आँकलन गर्न थालेका छन्।
कहिलेदेखि शुरू हुन्छ त्रिविमा पढाइ ?
काेराेनाका कारण तीन महिना पर सरेकाे त्रिविकाे शैक्षिक तीन महिना पर सरेकाे छ। त्रिविले हालै मात्र तीन महिनाका लागि शैक्षिक सत्र पर सारेकाे हाे। यसका लागि वैशाखबाट स्नातकोत्तर र फागुनबाट स्नातक सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि भदौदेखि स्नातक तथा मंसिरदेखि मास्टर्सको शैक्षिकसत्र सुरु हुने गर्दथ्यो।
किन सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिँदैन माओवादी?
सर्वाेच्चकाे फैसलापछि पूर्ववत् रूपमा विभाजन भएका एमाले र माओवादी केन्द्रकाे सत्ता साझेदारीबाट माओवादीले हात झिक्न सकिरहेकाे छैन। प्रधानमन्त्रीसँग आधारभूत विषयहरूमै मतभिन्नता रहेकाे बताउने माओवादीले तत्काल 'सेफ ल्याण्डिङ'काे स्थिति नदेखेपछि सत्ता साझेदारी निरन्तर राख्ने छाँट देखाएकाे छ। खासगरी कांग्रेस र जसपाले सत्ता साझेदारीका लागि रूचि नदेखाउँदा माओवादी अनिर्णित बनेकाे हाे।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेताद्वय घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीबाट ६–६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन्। उनीहरूलाई एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टीभित्रको सहकार्य सद्भावलाई क्षतविक्षत पार्ने गरी निरन्तर अवैधानिक गुट भेला गर्ने, त्यसलाई निरन्तरता दिने स्वीकारोक्तिसहित अहंकार, आत्मकेन्द्रित कुराहरू स्पष्टीकरणमा लेखेकोले निलम्बन गरेको बताइएकाे छ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासकाे मत लिनुपर्ने माओवादीकाे जिकिर
माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासकाे मत लिनुपर्ने बताएकाे छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा विभाजित भई तत्कालीन नेकपा (एमाले) र (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिएका कारण संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले चैत २३ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने मत उठेकाे हाे।
एमाले नेताहरूले भने, ओलीको तानाशाही कदम मान्दैनौँ
एमाले नेता माधवकुमार नेपालसहित ११ जनाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेताहरूलाई निलम्बन गर्ने कदम तानाशाही भएको भन्दै नमान्ने बताएका छन्। ओलीले सत्ताको दुरुपयोग गरिहेको आरोप लाउँदै उनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन सकाउन ओली लागिपरेको समेत बताएका छन्। त्यस्तै उनीहरूले निलम्बन विभाजनतिर जाने बाटाे भएकाे निष्कर्षसमेत निकालेका छन्।
ओलीकाे बाेल्ड निर्णय, नेताहरू नेपाल र रावल निलम्बित
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेताहरू माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई निलम्बित गरेका छन्। उनले नेताद्वयलाई पार्टी सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका हुन्। उनीहरूलाई गुटगत भेला गरेकाे, अनावश्यक टिप्पणी, कार्यव्यवहार गरेकाे, सरकार तथा पार्टीकाे बदनामी गरेकाे आराेप छ। यसअघि उनीहरूसँगै घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण साेधिएकाे थियाे।
म्यानमार कि ‘म्यान’ मार?
सैनिक शासन ब्यहोरीरहेको म्यानमारमा हिंसा बढ्दै गएको छ। सैन्य दमनमा परी अहिलेसम्म सयौँ जना सर्वसाधरणको मृत्यु भएको छ। सेनाले अन्तिम संस्कार गरिरहेका व्यक्तिहरूमाथि समेत गोली चलाएको छ। घटनासँगै हजारौँ मानिसहरू देश छोड्न थालेका छन्। उता सैनिकहरू भने रातभर पार्टीमा रमाएका खबरहरू बाहिरिएका छन्।
विश्वका ९४ सहरमध्ये प्रदुषणमा काठमाडाैँ पुनः पहिलाे स्थानमा
काठमाडाैँ पुनः एकपटक विश्वका सर्वाधिक प्रदुषण हुने सहरहरूमध्ये पहिलाे नम्बरमा परेकाे छ। वायु गुणस्तर मापन केन्द्रले प्रदुषणले जाेखिमकाे तह नाघेकाे बताएकाे छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले वायु प्रदूषण निकै बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन अपील गरेको छ। वायु गुणस्तर मापन केन्द्रले राजस्थानकाे धुलाे उडेर नेपाली आकाशमा आएकाे बताएकाे छ।
नेताकाे भाषणमा छैन ६० प्रतिशत जनतालाई भराेसा (सर्वेक्षण)
एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालकाे राजनीति गलत दिशामा बढिरहेकाे तथ्य बाहिर आएकाे छ। त्यस्तै सर्वेक्षणमा ६० प्रतिशत उत्तरदाताले नेताहरूकाे भाषणमा विश्वास नगर्ने तथ्य खुलेकाे छ। नेताका कुरा पत्याउनेमा ६ प्रतिशत जनतामात्रै छन्। त्यस्तै ५१.७ प्रतिशत उत्तरदाताले हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् भने धर्मनिरपेक्ष नै ठिक छ भन्ने उत्तरदाता ४०.३ प्रतिशत देखिएका छन्।
नेपालमा राजधानीबाहिर पहिलाेपटक कलेजाे प्रत्याराेपण
नेपालमा राजधानीबाहिर पहिलाेपटक सफल रूपमा कलेजाे प्रत्याराेपण गरिएकाे छ। चितवन मेडिकल कलेजले चैत ८ गते आइतबार ५४ वर्षीया धनकुमारी लामाकाे कलेजो प्रत्यारोपण गरेको हाे। यसअघि २०७३ मा नेपालमै पहिलाेपटक कलेजाे प्रत्याराेपण गरिएकाे थियाे। भक्तपुरमा रहेको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा डा. काेनले पहिलाेपटक कलेजाे प्रत्याराेपण गरेका थिए। प्रत्याराेपण सफल भएकाे थियाे।
नेपालमा पुनः काेराेना बढ्दै, भारतले खाेप निर्यात राेक्दै
नयाँ भेरियन्टकाे काेराेना भित्रिएकाे आशंकाका बीच नेपालमा संक्रमण बढेकाे छ। केही दिन यता नेपालकाे काराेना संक्रमण दर न्यून भएपनि एक्कासी बढ्न थालेकाे हाे। सरकारले संक्रमण बढ्दै गए लकडाउन गर्न सकिने बताएकाे छ। त्यस्तै संक्रमण बढ्दै जाँदा भारतले नेपाल लगायत देशमा काेराेना खाेपकाे निर्यातमा अस्थायी राेक लगाउने निर्णय गरेकाे छ।
पूर्व माओवादीहरूलाई एक ठाउँ ल्याउने प्रयास गरिँदै
पूर्व माओवादीहरूलाई एक ठाउँ ल्याउन माओवादी केन्द्रका नेता गाेपाल किराँतीले प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य र विप्लवलाई पत्र पठाएका छन्। उनले पूर्व माओवादी सबैले एक ठाउँ उभिने बेला आएकाे उल्लेख गरेका हुन्। यता प्रचण्डले साे प्रस्तावप्रति सकारात्मकता देखाएकाे मातृका यादवले जनाएका छन्। त्यस्तै प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको नयाँ मोडालिटीबारे छलफल भइरहेकाे बताएका छन्।
नयाँ भेरियन्टको कोरोना भित्रिएको विज्ञको दाबी, संक्रमण बढे लकडाउन
भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि नयाँ भेरियन्टको कोरोना संक्रमण फैलिएको आँकलन गर्न थालिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लागेसँगै यस्तो आँकलन हुन थालेको हो। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण उच्च भएमा लकडाउन हुनसक्ने बताएको छ। यद्यपि सरकार तत्काल लकडाउन गर्ने मुडमा नरहेको बताएको छ।
एमाले पार्टी कार्यालय सर्ने घरको भाडा कति ?
सिंहदरबारबाट नजिक पर्ने भन्दै नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय थापाथली सर्ने भएको छ। कार्यालय थापाथलीस्थित एक व्यापारीको घरमा सर्ने भएकाे हो। कार्यालय सर्ने भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घरकाे निरीक्षण गरेका छन्। घरभाडा कति भन्ने बारे एमालेले नखुलाए पनि स्वैच्छिक रहने घरधनीले बताएका छन्।
विना कसुर ४० वर्ष कैद सजाय काटेका नेपाली घर फर्किए
भारतमा ४० वर्षसम्म जेल परेकाे इलामका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना आइतवार स्वदेश फर्किएका छन्। इलाम घर भएका तिमिल्सिना सन् १९८० मा दार्जिलिङमा पक्राउ परेका थिए। भारत पश्चिम बंगालको दमदम करेक्सनल सेन्टरमा रहेका उनी कोलकाता उच्च अदालतको आदेशबमोजिम छुटेका हुन्। शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर उनी आइतबार नेपाल आइपुगेका छन्।
सरकारले अभूतपूर्व काम गरेकाे प्रधानमन्त्रीको दाबी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अभूतपूर्व काम गरेकाे बताएका छन्। बालुवाटारमा आयोजित उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा उनले छोटो समयमै पूर्वाधार तथा विकासमा धेरै काम भएकाे बताएका हुन्। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष सहित २३५ उद्योगपति एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। त्यस्तै उनले नेपाल छिट्टै आधुनिकतातर्फ जाने समेत बताए।
सरकारका कानुनी सल्लाहकारले दिए राजीनामा, आजै नयाँ नियुक्ति
सरकारका कानूनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता अग्‍निप्रसाद खरेलले राजीनामा दिएका छन्। शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफूले सरकारी वकिललाई चिनिने अवस्थामा पुर्याएकाे बताउँदै राजीनामा दिएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीसँगकाे मनमुटावका कारण राजीनामा दिएकाे बताइएकाे छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले नयाँ महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडालकाे नाम सिफारिस गरेका छन्। उनलाई राष्ट्रपतिले आजै नियुक्त गरेकी छन्।
निफ्रालाई लाग्याे शेयर मूल्यमा प्रभाव पारेकाे आरोप, साेधियाे स्पष्टीकरण
शेयर मूल्यमा प्रभाव पारेकाे भन्दै निफ्रालाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जले स्पष्टीकरण साेधेकाे छ। बैंकका सिइओ रामकृष्ण खतिवडाको एउटा बयानले शेयर बजारमा कम्पनीको मूल्य एक्कासी बढेपछि नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरेकाे हाे। सिइओले केही दिनअघि लण्डनको स्टक मार्केटमा ३० मिलियन डलरको बण्ड जारी गर्ने तयारी भएको बताएका थिए।
कर्णालीमा सत्ता संकटः एमालेले लियाे समर्थन फिर्ता
कर्णाली प्रदेशमा एमाललेले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएकाे छ। एमाले संसदीय दलको बैठकले नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। समथर्न फिर्ता लिएपछि शाही नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। उता एमालेकाे नेपाल समूहले भने समर्थन जारी रहेकाे बताएकाे छ।
सबै वितण्डाकाे जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली भएकाे नेपाल समूहकाे जिकिर
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी र देशभित्र भइरहेकाे सबै वितण्डाकाे जिम्मेवार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएकाे जिकिर गरेका छन्। सानेपामा आयोजित नेपाल पक्षीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनीलगायत नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाे, पार्टी फाेड्न तम्सिएकाे लगायत आरोप लगाएका छन्। भेलाबाट पुराना वामपन्थी नेताहरू नेपाल समूहमा खुलेका छन्।
नेपाल आयल निगमले एक महिनाकाे सेराेफेराेमा इन्धनकाे मूल्य दुईपटक बढाएकाे छ। पछिल्लाेपटक मंगलबार निगमले पुनः इन्धनकाे मूल्य बढाएकाे छ। मूल्यवृद्धि पछिपनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ, डिजेल पाँच रुपैयाँ तथा एलपी ग्याासमा प्रतिसिलिण्डर ३९२ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ। जसले निगमलाई पाक्षिक एक अर्ब २७ करोड ७० लाख घाटा भइरहेकाे छ।
देशकाे चालु खाता १ खर्ब बढीले घाटामा, व्यापार घाटा झनै बढ्याे
आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेपालकाे चालु खाता १ खर्ब १ अर्ब ९० करोडले घाटामा रहेको देखिएकाे छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा भने सुधार भएकाे देखिएकाे छ। यस अवधिमा ३८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएकाे छ। त्यस्तै ब्याजदर घटेकाे छ भने ऋण प्रवाह बढेकाे छ। उता व्यापार घाटा झनै बढेकाे देखिन्छ।
राष्ट्रपतिका अगाडि प्रधानमन्त्रीले भने, फेरि पनि संसद विघटन हुन्छ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति निवासमा आयाेजित सर्वदलीय बैठकमा संसद नचले फेरि पनि विघटन हुने बताएका छन्। उनले ताजा जनादेश नै अहिलेकाे आवश्यकता भएकाे समेत बताए। राजनीतिक सरगर्मीका बीच राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक डाँकेकी हुन्। कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै यसअघि संसद विघटन गरेकाे स्पष्टाेक्ति गरेकी छन्।
नेपाल समूहले आचाक्ली गरेको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी, भाँडभैलो नगर्न चेतावनी
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नेपाल पक्षले भाँडभैलो गरेको बताएका छन्। उनले आफूले आयोजना गरेको चियापानमा नआएका पार्टी नेताहरूले अर्कै भेलाकाे तयारी गरेर तमासा देखाएकाे टिप्पणाीसमेत गरे। गुटगत भेला गरे कारवाही गर्ने बताउँदै उनले आफूले त्यतातिर नजर राखेको बताए। यता नेपाल समूहले भने ओलीलाई कार्यक्रमको निम्तो दिएको छ।
भारतले राेकेन महाकालीमा एकतर्फी तटबन्ध निर्माणकाे काम
भारतले सीमा नदी महाकालीको बहाव परिवर्तन गरेर दार्चुला सदरमुकाम पारिपट्टि एकतर्फी रूपमा तटबन्ध बनाइरहेकाे छ। नेपालले यसअघि नै भारतीय प्रशासनलाई पत्राचार गरी एकतर्फी तटबन्दी राेक्न भनेकाे थियाे। ०७० साल असार २ गते महाकाली नदीमा आएकाे बाढीले कटान गरेकाे महाकाली नदीमा एकतर्फी रूपमा तटबन्ध हुन थालेसँगै स्थानीय त्रसित बनेका छन्।
लाहान मालपाेत बमकाण्डः एकजना पक्राउ
सिराहा लाहानस्थित मालपाेत कार्यालयमा आइतबार भएकाे बमविस्फाेटमा संलग्न रहेकाे आराेप एकजना पक्राउ परेका छन्। विस्फाेटमा संलग्न रहेको आशंकामा बलराम मण्डल पक्राउ परेका हुन्। घटनामा परी ८ जना घाइते भएका थिए। घाइतेहरूलाई काठमाडाैँ ल्याइएकाे छ। विस्फाेटस्थलबाट गाेइत समूहकाे पर्चा भेटिएकाे थियाे। विस्फाेटपछि मालपाेत कार्यालयकाे दैनिक काम कारबाही ठप्प भएकाे छ।
सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने माओवादीकाे तयारी
नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विभाजित गर्ने गरी आएकाे सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि छिट्टै पुनरावलोकनमा जाने भएकाे छ। केन्द्रकाे केन्द्रीय बैठकले नयाँ राजनीतिक परिदृश्यका लागि संवाद अगाडि बढाउने समेत बताएकाे छ। यसअघि सर्वाेच्चले पूर्व एमाले र माओवादीकाे एकता अवैधानिक ठहर्याउँदै पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएकाे थियाे। यसअघि केन्द्रले पुनरावलाेकनमा नजाने बताएकाे थियाे।
एमाले नेताहरूको पुनर्मिलनः नेपाल र ओली समूहबीच बैठक
एमाले नेताहरूको पुनर्मिलनः नेपाल र ओली समूहबीच छलफल भएको छ। पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएको बेला दुई पक्ष बीच छलफल भएको हो। बैठकमा नेपाल समूहले यसअघि २८ गतेको निर्णय नमान्ने बताएको छ। बैठक सौहार्दपूर्ण भए पनि निष्कर्ष पुग्न नसकेको उल्लेख छ।
प्रचण्डले बादललाई भने- उतै बस्नुस्
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीतिर लागेका केन्द्रका नेताहरूलाई फर्काउन जाेड नगर्ने बताएका छन्। विगतमा बिग्रिएका, भत्किएकाहरुलाई फकाउँदा हुन्छ कि भन्नु आफ्नो गल्ती भएको भन्दै उनले छिट्टै एमाले फुट्ने बताएका छन्। त्यस्तै उनले जरूरी पर्‍यो भने आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने समेत बताएका छन्।
एमाले र माओवादीबीच पुनः एकता हुने उपप्रधानमन्त्रीकाे दाबी
उपप्रधानमन्त्री एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नयाँ ढंगले पुन: एकता हुने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट उत्पन्न भएको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको सामना गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रका जिल्लादेखि केन्द्रसम्ममा नयाँ ढङ्गले पुनःएकता हुने उनकाे दाबी छ। त्यस्तै उनले देश ढिलाेचाँडाे चुनावमा जाने समेत बताए। पुनःस्थापनापछि संसद् स्वाभाविक नियम प्रक्रियाअनुसार चल्न नसके मुलुक ताजा जनादेशमा जाने उनले बताएका हुन्।
एमालेमा नेपाल-खनालकाे अलग्गै टिम, छुट्टै रणनीति
एमालेको माधव नेपाल समूहले वामपन्थी गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार चल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेकाे छ। सकेसम्म पुनः पार्टी एकताकाे सम्भावना खाेज्नुपर्ने मत उनीहरूकाे छ। एमालेकै सरकार राख्न सक्दाे प्रयास गर्ने बताउँदै उनीहरूले नयाँ परिस्थितिमा तत्काल माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता सम्भव नभए पनि सत्ता सञ्चालनका लागि गठबन्धन जारी राख्न सकिने निष्कर्ष उनीहरूकाे छ। त्यस्तै पार्टीभित्र ओली समूहले पेलेर लैजान खाेजे संघर्ष गर्ने रणनीति समेत याे समूहकाे रहेकाे छ।
सत्ता समीकरणका लागि सत्तारूढ एमाले र माओवादी केन्द्रले जनता समाजवादी पार्टीलाई तानातान गरिरहेका छन्। सर्वाेच्च अदालतले नेकपाकाे एकीकरणलाई अवैधानिक ठहराएसँगै अबकाे नयाँ सत्ता समीकरणकाे निर्णायकका रूपमा जसपा अगाडि देखिएकाे हाे। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएमा एमाले जसपासँग मिलेर सरकारलाई निरन्तरता दिने रणनीतिमा देखिएकाे छ भने माओवादी भने कांग्रेस र जसपासँग मिलेर सरकार बनाउने रणनीतिमा देखिएकाे छ। उता जसपामा पनि कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा दुई धारमा विभक्त भएकाे छ।
सकेसम्म कम्युनिस्ट सरकार जाेगाउनुपर्ने नेपाल-खनाल समूहकाे निष्कर्ष
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सकेसम्म केपी शर्मा ओलीको सरकार जाेगाउनुपर्ने बताएका छन्। सम्भव भएसम्म अहिलेको सरकार जोगाउनुपर्ने उनीहरूले निष्कर्ष निकालेका हुन्। त्यस्तै उनीहरूले एमालेलाई एकताबद्ध लैजाने काम प्रधानमन्त्री ओलीकै भएकाे बताएका छन्।
एमाले–माओवादीलाई निवार्चन आयोगको ताकेता, 'एकताका लागि १५ दिनभित्र आउनू'
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रका रूपमा फर्किएको नेकपालाई निर्वाचन आयोगले पुनः एकताका लागि १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनेको छ। आयोगको बैठकले यसअघि एकता भई बनेको पार्टी बदर भएकाले फेरि एकीकरण गर्ने भए दलको नयाँ नाम र चिह्न प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र निवेदन दिन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो। यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नयाँ पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाममा दर्ता गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले सो पार्टी पहिल्यै अर्कैको नाममा दर्ता भइसकेकाले सोही नाम दिन नसकिने फैसला गरेको थियो। याेसँगै निर्वाचन आयोगले विधिवत् रूपमा ओली-प्रचण्ड नेतृत्वकाे नेकपा खारेज गरेकाे छ।
सर्वाेच्चकाे फैसलाले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसलाई ओली हटाउने उपयुक्त माैकाकाे रूपमा ठम्याएकाे छ। कांग्रेसले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने संकेत गरेको हाे। देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीलाई विश्वासमा लिएर नयाँ सरकार बनाउन गृहकार्य थालेकाे हाे। त्यस्तै कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले जसकाे नेतृत्वमा सरकार बने पनि ‘अर्ली इलेक्सन’मा जानुपर्ने बताएका छन्।
एमाले र माओवादी छुट्टिएसँगै प्रदेश सरकारकाे भविष्य के ?
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताएसँगै प्रदेश सरकारहरू समेत अस्थिर बन्ने भएका छन्। प्रदेश सरकारमध्ये प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री झन् बलिया देखिएका छन् भने तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिएका चार मुख्यमन्त्री जोखिममा परेका छन्।
एमालेभित्र पुनः ओली-नेपाल टक्कर, केन्द्रीय समितिमा काे बलियाे ?
सर्वाेच्चकाे फैसलाले वैधानिक रूपमा पूर्ववत् एमाले र माओवादी ब्यूँतिएका छन्। पार्टी ब्यूँतिएसँगै साबिककाे एमालेभित्र पुनः ओली-नेपाल टक्कर देखिन थालेकाे छ। केन्द्रीय समितिका केही सदस्य विभिन्न कारणले समितिमा छैनन्। त्याे सबै संख्या घटाउँदा एमालेमा अहिले २ सय २५ केन्द्रीय सदस्यकाे समिति रहेकाे देखिन्छ। जसमध्ये केपी शर्मा ओलीसँग १ सय २०, माधव नेपालसँग १ सय ३, वामदेव गौतमसँग २ सदस्य रहेका बताइन्छ। तर, केहीले भने नेपाल समूहमा ९० जना मात्रै केन्द्रीय सदस्य रहेकाे बताएका छन्। तीन जनाको पक्षधरता भने स्पष्ट हुन सकेको छैन।
माधव नेपाल एमालेमै रहने, माओवादी केन्द्र ब्यूँताउँदै प्रचण्ड
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले नेकपा अवैधानिक भएसँगै पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी ब्यूँतिएका छन्। यसकाे असरस्वरूप नेकपामा रहँदा एउटा पक्षका रूपमा रहेका प्रचण्ड-नेपाल पनि आ–आफ्नो पूर्व पार्टीमा फर्किने भएका छन्। सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेता माधवकुमार नेपालसहित पूर्वएमाले नेताहरू एमालेमै फर्किने र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरूले माओवादी केन्द्र नै ब्यूँताउने निर्णय गरेको हाे।
एमाले पुनःस्थापना गर्दै ओली समूह
दल दर्ता सम्बन्धी सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि नेकपा ओली समूहले पूर्व नेकपा (एमाले) पुनःस्थापना गर्न थालेको छ। सर्वोच्चले पूर्व माओवादी केन्द्र र एमालेलाई एकता नभएकै स्थितिमा रहेको व्याख्या गरेसँगै वैधानिक रूपमै यी दुई पार्टीबीच एकता नभएको ठहर गर्दै पूर्व एमालेले विभिन्न ठाउँमा पार्टी कार्यालयहरू स्थापना गर्न थालेका छन्। त्यस्तै पूर्व एमाले समूहले केन्द्रीय पार्टी कार्यालयकाे बाेर्ड फेर्ने तयारी समेत गरेकाे छ। उता प्रधानमन्त्री ओलीले हिजै आफूले पूर्व एमालेको बैठक डाक्ने बताएका थिए।
भीम रावललाई प्रधानमन्त्रीले भने, मेराे पार्टीबारे जान्न सर्वाेच्च जानुस्
आफूलाई कुन पार्टीको भनेर सोध्ने आफ्नै दलका सांसद भीम रावललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीबारे थाहा पाउन सर्वोच्च जान सुझाएका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद् रावलले सर्वोच्चको फैसलालाई सन्दर्भ लिँदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको नाम सोधेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले रावललाई तपाईंको पार्टी कुन हो भनेर सोध्न बाध्य नपार्न समेत चेतावनी दिएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलाे संसद बैठक नै अवरुद्ध हुनुलाई पहिलाे गाँसमै झिँगाकाे संज्ञा दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले पुनर्जिवित एमालेकाे बैठक बाेलाउने
सर्वाेच्चले पूर्वमाओवादी केन्द्रसँगै एमालेलाई ब्यूँताएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व एमालेकाे बैठक बोलाउने बताएका छन्। आइतबार बालुवाटारमा बसेकाे संसदीय दलको बैठकमा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमालेको बैठक बाेलाउने बताएका हुन्। केही दिनभित्रै एमाले दलको बैठक बसेर नयाँ राजनीतिक कोर्सबारे निर्णय लिइने समेत ओलीले बताए। त्यस्तै उनले पूर्वमाओवादीले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासकाे मत लिने उल्लेख गरे।
छोटकरी विशेष2महिना पहिले
डिम्याट खाता संख्या ३१ लाख पुग्यो, सयौं व्यक्तिको नाममा एउटैको आवेदन
नेपालमा डिम्याट खाताको संख्या ३१ लाख पुगेको छ। पछिल्लो समय शेयर बजारमा सबैको आर्कषण बढ्दै गएको बेलामा डिम्याट खाताको संख्या बढ्दै गएको हो। यद्यपि डिम्याट बनाएर पनि कारोबार गर्नेहरूको संख्या भने निकै कम रहेको छ भने उता सयौँ जनाको नाममा एउटैले आवेदन दिने ‘डोके’ प्रवृत्ति समेत मौलाउन थालेको छ।
आजबाट संसदको सातौँ अधिवेशन सुरु हुँदै, यस्तो छ कार्यसूची
आइतबारदेखि संसदको सातौँ अधिवेशन सुरु हुँदैछ। अपराह्न चार बजे बस्ने गरी तय भएको बैठकमा ९ वटा सम्भावित कार्यसूची राखिएका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार शोक प्रस्तावदेखि विभिन्न अध्यादेशहरू आजको संसद बैठकमा पेश हुनेछन्। संसद बैठकको अन्तिम कार्यसूची भने कार्यव्यवस्थापन परामर्श समितिको बैठकले टुंगो लगाउने छ।
काेराेना खाेप लाउँदै प्रधानमन्त्री, दाेस्राे चरणकाे खाेप अभियान भाेलि देखि सुरू हुने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार काेराेना खाेप लाउने भएका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका अनुसाार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार बिहान १० त्रिवि शिक्षण अस्पताल गएर कोरोना खोप लगाउने भएका हुन्। सरकारले फाल्गुन २३ गतेबाट दोस्रो चरणको अभियान अन्तर्गत ६५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई काेराेना खाेप लाउने याेजना अघि सारेकाे छ। ६ हजारभन्दा बढी खोप केन्द्रबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरू हुन लागेकाे हाे।,
निर्वाचन आयोग प्रचण्ड-माधव समूहकाे पत्र- तत्काल नेकपा विवाद सुल्झाइ पाऊँ
नेकपाकाे विवाद तत्काल निरूपण गर्न नेकपाकाे प्रचण्ड–माधव समूहले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएकाे छ। कानुन, नेकपाको विधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यताबमोजिम तत्काल निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहले आयोगलाई पत्र पठाएकाे हाे।
भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति नपाउने अख्तियार प्रमुखकाे दाबी (अन्तर्वार्तासहित)
अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन्। नागरिकको अपेक्षा र मिडियाले उठाएका विषयलाई संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन र भ्रष्ट्राचार निवारण गर्ने ऐनको दायराभित्र रहेर विधि प्रक्रिया र कानूनसम्मत ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरे। त्यस्तै उनले आयोगको इतिहासमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रभावकारी र उत्कृष्ट काम गरेर जाने प्रयास गर्ने प्रमुख आयुक्त राईले बताए।
ओलीसँग एकता हुन नसक्ने प्रचण्डकाे दाबी (भिडियाेसहित)
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग एकताकाे सम्भावना नरहेकाे बताएका छन्। ओलीले आफूलाई ध्वस्त पार्ने याेजना अघि सारेकाे बताउँदै ओली प्रतिगमनकारी भूमिका खेल्ने व्यक्ति भएकाे उनले उल्लेख गरे।
सांसदहरूसँग ओलीले भने, 'राजीनामा मेराे शब्दकाेशमा छैन'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वाेच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना मात्रै गरेकाे र आफूलाई नहटाएकाे बताएका छन्। आफूनिकट सांसदहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन्। ओलीले राजीनामा आफ्नो शब्दकोशमा नरहेकोसमेत उल्लेख गरेका छन्। उनले आफूलाई हटाउन खोजे मैले प्रतिवाद गर्नु राजनीतिक धर्म भएकाे समेत बताएका थिए।
संसद विघटनकाे मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, कहिले आउला फैसला ?
सबै प्रक्रिया सकिएर फैसलाकाे चरणमा प्रवेश गरेकाे संसद विघटन सम्बन्धी सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दा मंगलबार हेर्दाहेर्दैमा चढेकाे छ। मुद्दाका पक्ष, विपक्ष तथा एमीकस क्युरीले बहस नाेट दिएसँगै मुद्दा फैसलाकाे चरणमा पुगेकाे हाे। कानुनविद्हरूका अनुसार सर्वाेच्चले यही साता फैसला दिनसक्ने सम्भावना रहेकाे छ।
महान्यायाधीवक्ताले राजीनामा दिएकाे कुरा हल्ला मात्र
मंगलबार बिहान मिडियाहरूमा आएकाे महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले राजीनामा दिएकाे खबर सत्य नभएकाे पुष्टि भएकाे छ। महान्यायाधीवक्ता खरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले राजीनामा नदिएकाे बताएका हुन्। मंगलबार बिहानै केही अनलाइनहरूमा उनले राजीनामा दिएकाे खबर आएकाे थियाे।
१० दिनपछि खुल्याे ताताेपानी नाका
माघ ३० गते शुक्रबारबाट बन्द भएको ताताेपानी नाका आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। चिनियाँहरूकाे ल्होसार बिदा सकिएपछि नाका पुनः सञ्चालनमा आएको हाे। बन्द नाका खुलेसँगै अब व्यवसायीहरुले चाहेजति सामान तातोपानी नाकाबाट भित्र्याउन सक्ने भएका छन्।
छोटकरी विशेष3महिना पहिले
प्रधानमन्त्रीका वकिलले बुझाए बहस नाेटः भने, विघटन प्रधानमन्त्रीकाे अधिकार
प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले सर्वाेच्च अदालतमा बहस नाेट बुझाएका छन्। एमीकस क्युरीकाे बहस सकिएसँगै सर्वाेच्चले वादी-प्रतिवादी दुवैलाई १० गतेभित्र बहस नाेट बुझाउन भनेकाे थियाे। फैसलाबारे भने कुनै औपचारिक जानकारी बाहिरिएकाे छैन।
इन्धनमा बढेकाे २ रुपैयाँकाे असरः ९० रुपैयाँसम्म बढ्याे हवाई भाडा
इन्धनकाे मूल्य वृद्धि भएसँगै हवाई भाडा पनि बढेकाे छ। नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर २ रुपैयाँको दरले हवाई इन्धनको मूल्य बढाउने निर्णय गरेपछि भाडा बढेकाे हाे। मूल्य बढाेत्तरी भएपछि काठमाडौँबाट माउन्टेन फ्लाइटमा जानेका लागि ७० रुपैयाँ बढी भाडा पर्नेछ भने काठमाडौँबाट धनगढी रुटमा ९० रुपैयाँ भाडा बढी पर्नेछ।
कांग्रेस महाधिवेशन भदाै ७ देखि १० गते गर्ने निर्णय
नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशन आगामी भदाै १ गतेदेखि १० गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेकाे छ। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राखेको महाधिवेशनको कार्यतालिकासहितको प्रस्ताव सामान्य संशोधनसहित अनुमोदन गरेको हाे।
बढ्दाे मूल्यवृद्धिप्रति थाल ठटाएर विराेध
पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धिको विरोधमा जनता समाज पार्टी (जसपा) निकट विद्यार्थीहरूले थाल ठटाएर प्रदर्शन गरेका छन्। माइतीघर मण्डलामा बुधबार आयाेजित प्रदर्शनमा थाल र चम्चा बजाउँदै विद्यार्थीहरुले प्रतिगामी सरकार मुर्दावाद, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि फिर्ता गर लगायतका नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका हुन्। केही दिन यता महँगी निरन्तर बढिरहेकाे छ। चुनाव घाेषणा भएसँगै दैनिक उपभाेग्य वस्तुहरूकाे मूल्य वृद्धि भइरहेकाे छ।
भागरथी भट्टकाे बलात्कार र हत्याका आराेपी दिनेश भट्टले अपराध स्वीकारेकाे प्रहरीले जनाएकाे छ। उनले प्रहरीलाई मार्नकै लागि विद्यालयबाट छिटाे घर आएकाे साबिती दिएका छन्। उनले आफूले फुपुको बदला लिन हत्या गरेको बताएको प्रहरीले जनाएकाे छ। उनले भागरथीलाई लडाएर बेहोस बनाएपछि बलात्कार गर्न खोजेको तर बलात्कार भने नगरेकाे बयान दिएकाे बताइएकाे छ। आराेपी भागरथीलाई न्याय माग्न गरिएकाे आन्दाेलनमा समेत सहभागी थिए।
भागरथी हत्याका आराेपीलाई ५ दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति
भागरथी भट्टको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका दिनेश भट्टलाई थप ५ दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत बैतडीले अनुमति दिएकाे छ। भागरथीका दाइ केशवराज भट्टले बुधबार बिहान आरोपी भट्टविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए।
भागरथी बलात्कार–हत्या प्रकरणः एकजना पक्राउ
भागरथी भट्टकाे बलात्कार र हत्यामा संलग्न रहेकाे आराेपमा उनकै विद्यालयमा अध्ययनरत एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा दिनेश भट्ट रहेकाे प्रहरीले बताएकाे छ। उनलाई मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याइएको छ। उनीविरुद्ध ज्यान मुद्दामा म्याद थप गरेर विस्तृत अनुसन्धान हुने बताइएकाे छ।
नेपालमा सरकार बनाउने भारतीय गृहमन्त्रीकाे बयानविरुद्ध 'एक्सन'मा नेपाल
भारतको उत्तरपूर्वी राज्य त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लव देवले नेपालका सम्बन्धमा दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा नेपालले भारतकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे छ। भारतस्थित नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपाल डेस्कमा फाेन गरी बयानबारे प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री देवले गृहमन्त्रीसँगकाे वार्तामा नेपाल र श्रीलंकामा समेत बिजेपी सरकार बनाउने याेजना रहेकाे भनेकाे बताएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिदमा अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतमा बनेको कोभिसिल्ड भाक्सिन खरिद गर्दा अग्रिम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि भारतको सिरम इन्स्टिच्यूटसँग एक डोज खोपको ४ डलरमा खरिद गर्ने सहमति भएपनि कम्पनीले अग्रिम भुक्तानी माग्दा प्रक्रिया अघि बढेकाे थिएन।
पार्टीभित्रकाे झगडाका कारण संसद विघटन गर्न नपाउने एमीकसकाे जिकिर
एमीकस क्युरीका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन बदनियत र असंवैधानिक भएको बताएका छन्। उनले पार्टीभित्रकाे झगडाका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने दाबी गरेका हुन्। त्यस्तै अदालतले गर्ने फैसलामा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही हुने संविधानले व्यवस्था गरेको थलो पनि देखाउनुपर्ने कार्कीको भनाइ थियो।
संसद विघटनविरुद्धकाे मुद्दाः बहस सकियाे, एमिकस क्युरीकाे राय लिइँदै
संसद विघटनकाे मुद्दामा पक्ष विपक्षकाे बहस सकिएसँगै एमिकस क्युरीबाट राय संकलन गर्ने कार्य सुरु भएकाे छ। अदालतकाे सहयाेगीका रूपमा रहने एमिकस क्युरीले मंगलबारबाट सर्वाेच्च अदालतलाई राय दिन थालेकाे हाे। एमिकसकाे राय बुझेसँगै अदालतले फैसलाकाे मिति तय गर्ने बताएकाे छ।
राजाले हुर्काएका कम्युनिस्ट आफैँ राजा बनेकाे देउवाकाे आराेप
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्टहरूलाई राजाले हुर्काएकाे आराेप लगाएका छन्। राजाले आफूहरूलाई दुःख दिएकाे बताउँदै उनले कम्युनिस्टहरू नै राजा बनेकाे बताएका हुन्। देउवाले जुलुसले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय जुलुसले नगर्ने समेत बताएका छन्। त्यस्तै उनले वैशाखमा चुनाव हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्याधीशले सर्वाेच्चमा बुझाए जवाफ, यस्ताे छ जवाफकाे मजबुन
अदालतकाे अपहेलना मुद्दामा चारजना पूर्वप्रधान्यायाधीशहरूले सर्वाेच्चमा लिखित जवाफ बुझाएका छन्। अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा झेलिरहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्। अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूले छुट्टाछुट्टै जवाफ पेश गरेका हुन्। जवाफमा अदालतमा विचाराधीन हुँदैमा जनसरोकारकाे विषयमा बोल्न नपाइने भन्ने नहुने बताइएकाे छ।
कुलमानले नभई आफूले लाेडसेडिङ हटाएकाे प्रधानमन्त्रीकाे दाबी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई कुलमानले नभई आफूले लोडसेडिङ हटाएकाे बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित उद्योगी तथा व्यावसायीको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उनले लोडसेडिङ हटाएको जस अरूले लिन खोजे पनि भारतसँग विद्युत खरिद गरी आफूले लोडसेडिङ हटाएको बताएका हुन्। यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेलले पनि प्रधानमन्त्री ओलीकाे पहलमा लाेडसेडिङ हटेकाे बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीकहाँ १५ दिनसम्म पनि पुगेन सर्वाेच्चकाे आदेश
अदालतको अवहेलना मु्द्दामा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको १५ दिनसम्म पनि अदाललतमा जवाफ पुगेकाे छैन। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अदालतबाट उक्त आदेशको जानकारीसहितको पत्र नआएको बताए।
शेयर बजार लाग्याे ओरालाे, के-के भयाे आज ?
साताको अन्तिम कारोबार हुने दिन - बिहीबार सेयर बजारओरालाे लागेकाे छ। आज नेप्से परिसूचक १६.११ अंकले घटेर २५२६.९२ अंकमा पुगेको हो। नेप्से ०.६३ प्रतिशतले घटेको हो। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक पनि १.६६ अंकले घटेर ४६३.४७ अंकमा पुगेको छ। कुल २ सय ६ वटा कम्पनीको १ करोड ५९ लाख ९२ हजार ९९० कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ८ अर्ब ३८ करोड २२ लाख १२ हजार ६३४ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ।
विप्लव समूहकाे माेर्चाबन्दी, सरकारलाई घेर्ने तयारी
प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव समूह)ले अन्य ३ पार्टीसँग माेर्चाबन्दी गरेकाे छ। माेर्चामा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल (आहुति) नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी रहेका छन्। माेर्चाले सरकार विरुद्ध माघ २९ देखि फागुन १८ गतेसम्मका संघर्षका कार्यक्रमहरू समेत सार्वजनिक गरेकाे छ। यसअघि सरकारले विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउने काेसिस गरेकाे थियाे।
पक्राउ परेकाे ५ घण्टामै रिहा भइन् झाँक्री
प्रहरीले नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई रिहा गरेको छ। पक्राउ परेकाे ५ घण्टामै रिहा भएकी झाँक्रीले राष्ट्रपतिकाे आलाेचना गरेकाेमा पश्चाताप नभएकाे बताएकी छन्। उनले आफ्नाे रिहाइले प्रतिगमन झुकेकाे प्रक्रियाका रूपमा रहेकाे बताइन्। प्रहरीले भने संवैधानिक राष्ट्रपतिप्रति सम्मान रहेकाे भन्ने लिखित कागज बनाएपछि झाँक्री रिहा भएकाे बताएकाे छ। राज्यविरुद्धको कसुरको आरोपमा पक्राउ परेकी झाँक्रीलाई प्रहरीले सामान्य सोधपुछपछि बिहीबार साँझ रिहा गरेको हो।
कहिले आउला संसद विघटनविरुद्धकाे मुद्दाकाे फैसला
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाकाे बहस अन्तिम चरणमा पुगेसँगै छिट्टै फैसला आउने आँकलन गर्न थालिएकाे छ। विपक्षीहरूको बहस अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेसँगै संवैधानिक इजलासले उक्त विवादलाई फागुनको दोस्रो साताआसपास निरूपण गर्ने सम्भावना रहेकाे बताइएकाे छ।
१० लाख मान्छे बालुवाटार घेर्न ल्याउने प्रचण्डकाे चेतावनी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकाे प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्न १० लाख मान्छे मैदानमा उतार्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताका पीडा नबुझे सिंहदरबार र बालुवाटार घेरिने बताएका हुन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलन विद्रोहमा गए आँधीहुरी आउने प्रचण्डकाे भनाइ थियाे।
यस्ताे भयाे प्रचण्ड-नेपाल समूहकाे आमसभा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले बुधबार काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। दाहाल–नेपाल समूहले राजधानीका विभिन्न स्थानबाट र्‍याली निकालेर भृकुटीमण्डपमा विशाल सभाको आयोजना गरेको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे नारायणहिटी दरबार अगाडि आमसभा गरेका थिए। ओलीकाे साे आमसभा भन्दा आजकाे आमसभा विशाल भएकाे दाबी गर्दै कार्यक्रममा ५ लाखकाे संख्यामा मानिसहरू आएकाे दाबी अध्यक्ष दाहालले गरेका छन्। कार्यक्रम सकिएपछि नेताहरूले सभास्थलमा सरसफाइ समेत गरेका छन्।
अदालत र आयाेगलाई खुट्टा नकमाउन प्रचण्ड-नेपाल समूहकाे आग्रह
नेकपाकाे प्रचण्ड-माधव समूहले सर्वाेच्च अदालत र निर्वाचन आयाेगलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गरेकाे छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड निर्णय लिने सन्दर्भमा अदालत र आयाेगले खुट्टा कमाउन नहुने बताएका हुन्। त्यस्तै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आवश्यक परे निर्वाचन आयाेगमा ४४१ जना ल्याएर आउने समेत बताएका छन्.
छोटकरीमा : चुनाव निर्धारित समयमै हुने सरकारकाे दाबी
सरकारले निर्धारित समयमै चुनाव हुने दाबी गरेकाे छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री स्वयं निर्वाचन आयोगमा चुनावकाे तयारीकाे विषयमा जायजा लिन पुगी समयमै चुनाव हुने बताएका हुन्। सरकारले हिजाे मात्रै पहिलाे चरणमा ४० तथा दाेस्राे चरणमा ३७ जिल्लामा चुनाव गराउने निर्णय गरेकाे थियाे। तर, नेकपाकै प्रचण्ड-माधव खेमाले ओलीको कदम नसच्चिए देश गम्भीर संकटमा फस्ने बताएकाे छ।
छोटकरीमा : ११ कम्पनीको सेयर कारोबार राेक्का
वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगरेकाे भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले ३ बैंक तथा वित्तीय संस्था, १ बिमा कम्पनी र ७ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोक्का गरेकाे छ। आजै नेप्से परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च स्थानमा पुगेकाे छ। त्यस्तै नेप्सेमा टि प्लस टु लागू भएकाे छ।
छोटकरी विशेष पौष २०७७
भारतले नयाँ आर्थिक वर्ष २०२१/२२ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेकाे छ। भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसदमा पेश गरेकाे बजेट भारतीय इतिहासमै पहिलाेपटक 'ट्याबलेट'बाट सार्वजनिक गरिएकाे हाे। यसपटककाे बजेटमा भारतले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकाे छ। त्यस्तै भारतले नेपाललाई दिँदै आएकाे अनुदानमा समेत वृद्धि गरेकाे छ।
छोटकरीमा : नेकपाका दुवै समूह निर्वाचन आयोगमा
निर्वाचन आयाेगले नेकपाका दुवै समूहलाई आयोगमा बाेलाएर छलफल अघि बढाएकाे छ। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुबै पक्षसँग आज छलफल गरेकाे हाे। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेर आयोगले निर्वाचन तयारी र दल दर्ता प्रक्रियाबारे छलफल गर्न बहादुर भवनस्थित कार्यालयमा बोलाएको हाे।
छोटकरीमा: इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपीओ बाँडफाँड
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको साधारण शेयर (आइपीओ) काे बाँडफाँड सम्पन्न भएकाे छ। त्यस्तै याे साता शेयर बजारले नयाँ रेकर्ड राखेकाे छ। अघिल्लो साता नेप्सेमा ३४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार भएकोमा याे साता बढेर ४४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।
छाेटकरीमाः नेकपाका दुवै समूहलाई निर्वाचन आयाेगले डाक्याे
निर्वाचन आयाेगले नेकपाका दुवै समूहलाई बाेलाएकाे छ। आयोगले मध्यावधि निर्वाचनको तयारी र निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाएको हो।
छाेटकरीमाः सुशासन सूचकांकमा खस्कियाे नेपाल, बढ्याे भ्रष्टाचार
नेपाल सुशासनको सूचकांकमा गत वर्षभन्दा खस्किएको छ। नेपाल ३३ अंकसहित ११७औं स्थान पुगेकाे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले जनाएकाे छ।
छाेटकरीमाः नेकपालाई पुनः जाेड्ने वामदेवकाे प्रयास
विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई पुनः एक ठाउँमा ल्याउन उपाध्यक्ष वामदेव गाैतमले प्रयास गरिरहेका छन्। विवादपछि दुई भागमा विभक्त नेकपाकाे कुनै पनि खेमामा नलागेका गाैतमले पार्टी एकता बचाउने भन्दै अभियान थालेका हुन्।
छाेटकरीमाः भारत - किसान आन्दाेलनमा हिंसा
भारतमा केही महिना यतादेखि चलिरहेकाे किसान आन्दाेलनले मंगलबार हिंसाकाे रूप लिएकाे छ। प्रहरीसँग भएकाे प्रदर्शनकारीकाे भिडन्तमा परी एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। भारतमा आजै गणतन्त्र दिवस समेत मनाइएकाे छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वाेच्चमा अदालतकाे अपहेलना मुद्दा दायर भएकाे छ। माघ ११ गते वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा पेश गरेका हुन्। त्यस्तै ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू विरुद्ध समेत अपहेलना मुद्दा दायर भएकाे छ।
छाेटकरीमाः भारत चीन सीमामा पुनः भिडन्त
केही समयअघि देखि तनावग्रस्त भारत-चीन सीमामा पुनः भिडन्त भएकाे छ। भिडन्तमा दुवैतर्फका केही सैनिक घाइते भएका छन्। झडपपछि भारतले चीनका सैनिकलाई सीमा क्षेत्रबाट खेदेकाे बताइएकाे छ। यसअघि भारतचीनका सैनिकहरूबीच झडप हुँदा २० जना भारतीय सैनिककाे ज्यान गएकाे थियाे।
छाेटकरीमाः अधिवक्तालाई प्रधानमन्त्रीले गाली गरेकाे आराेप
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरी व्यक्तिगत टिप्पणी गरेकाे भन्दै अधिवक्ताहरूले विराेध जनाएका छन्। अधिवक्ता भण्डारीले स्वयंले पनि यसकाे विराेध गरेका छन्। उनले यस विषयमा अदालतमा समेत प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले केहीदिन अघि अधिवक्तालाई अदालतमा लगेर 'तमासा' देखाएकाे आराेप लगाएका थिए।
छाेटकरीमाः नागरिक आन्दोलनमा प्रहरीकाे दमन
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध निकालिएको नागरिक मार्चमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेकाे छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमको विरोधमा नागरिक अगुवाहरुले गरेको बालुवाटार मार्च पासमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा केही अगुवाहरु घाइते समेत भएका छन्। नागरिक अगुवाहरूले प्रहरी दमनकाे घाेर भत्र्सना गरेका छन्।
छाेटकरीमाः प्रचण्ड बाबुरामकाे पुनःमिलन
लामाे समय एउटै पार्टीमा रहेर सशस्त्र संघर्ष गरेका प्रचण्ड र बाबुराम पुनः एकै ठाउँ देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै वैचारिक रूपमा एकै ठाउँ देखिएका प्रचण्ड र बाबुराम बीच लामाे समयपछि औपचारिक छलफल भएकाे छ। त्यस्तै उनीहरूले आजै उपरराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनसँग पनि भेट गरेका छन्।